काँग्रेसले हरेक क्षेत्रमा निहूँ खोज्यो : प्रधानमन्त्री ओली | Ratopati
प्रमको पत्रकार सम्मेलन
‘देउवा नै वेल घेर्न गएकोमा आश्चार्य लाग्यो’
काठमाडौ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसप्रति कटाक्ष गरेका छन् । उनले हरेक क्षेत्रमा काँग्रेसले निहुँ खोज्न थालेको बताए ।
मङगलबार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसको पछिल्लो व्यवहार आश्चार्यजनक भएको पनि बताए । उनले आफुलाई संसदमा बोल्न नदिन काँग्रेसका नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवा नै वेल घेर्न गएकोमा आश्चार्य लागेको बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न समय लिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि आफुले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रमा कहीँ हुँदैन । प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न रोक्न कुनै विषयमा मतभेद पनि होइन । पहिला प्रधानमन्त्री र त्यसपछि प्रतिपक्षी दलको नेताले बोल्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो,’ प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, ‘हरेक क्षेत्रमा निहँु खोज्ने काँग्रेसले आश्चर्यजनक व्यवहार गर्यो । म आश्चर्यचकित भएको छु ।’
प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न नपाएपछि पत्रकार सम्मेलन नगरेको भन्दै संसदमा अमर्यादित कृयाकलाप भएपछि देशवासीको ध्यानाकर्षण मात्र गराएको बताए । उनले संसदमा बोल्नुपर्ने विषय समय क्रममा बोल्ने पनि स्पष्ट पारे ।
‘म स्मरण गर्न चाहान्छु । हामीले धेरै लामो बलिदानपूर्ण संघर्षबाट आजको व्यवस्था ल्याएका हौै । तर आज लोकतन्त्र, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रयासका विरुद्ध अलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको मोर्चावन्दी स्पष्ट देखा परेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध अति दक्षिणपन्थीदेखि अति उग्रवामपन्थीहरु एकजुट भएको अवस्था छ ’ प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । उनले त्यस्ता प्रवृतिहरुप्रति सजग हुनुपर्ने भन्दै उनले लोकतान्त्रिक शक्तिहरु नै देशको अवस्था विथोल्न लागेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका नाममा लोकतन्त्रका जरा काट्न्े काम भएको पनि बताए । उनले समृद्धि हासिल गर्न सम्बाद र सहकार्यका लागि सरकार खुला रहेको पनि बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको विचारको पूर्ण पाठ
त्यो हाम्रा विचारहरु एकैचोटी ४०÷४५ लाख भ्यूअर्सले एकै चोटी हेरेको हामीलाई बताइएको थियो । मैले बोलिरहेको बेला पनि ४० लाखको संख्यामा भ्यूअर्स पुगेको जानकारी गराइएको थियो । त्यो ठाउँमा हामीले नेपालका उपलब्धिहरु, नेपालका आवश्यकताहरु, नेपालको अवस्था र नेपाल कता जान चाहन्छ ? नेपाल कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ ? नेपालका आंकाक्षाहरु पनि बतायौँ ।
त्यसै गरेर जेनेभामा आई.एल.ओ.को साईडलाइनमा पनि र औपचारिक ठाउँहरुमा पनि हामीले टर्कीका उपराष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री, स्विजरल्याण्डका पूर्व राष्ट्रपतिसँग समेत ग¥यौँ र अरु संक्षिप्त भेटघाटहरु राष्ट्रसंघका महासभाका अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रिका राष्ट्रपति लगायतसँग पनि भेटघाट भयो र नेपालको बारेमा राम्ररी हामीले ध्यानाकर्षण ग¥यौँ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भूमिकालाई विस्तार गर्ने काम गरेका छौँ ।
त्यस कारण ७ दिनको यो भ्रमण राम्रो भएको छ । यसले ती देशसँगको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष रुपमा त्यसै गरी युयानसँगको सम्बन्ध, दक्षिण अफ्रिकासँगको सम्बन्ध, नर्वेसँगको सम्बन्ध, टर्कीसँगको सम्बन्धहरुलाई पनि अगाडि बढाउने कामहरु गरेका छौँ र हामीले हाम्रो देशको आई.एल.ओ.मा हाम्रा देशको उपलब्धिको बारेमा, मजदुर आन्दोलनको बारेमा, मजदुरहरुले प्राप्त गरेका सफलताको बारेमा, मजदुर आन्दोलनका उपलब्धिहरुका बारेमा र हामीले तयार गरेका कानुनहरुका बारेमा प्रस्तुत ग¥यौँ र त्यो एउटा हाम्रो भूमिका त्यहाँ लिडिङ्ग भूमिकाको रुपमा रह्यो त्यो एउटा अर्को खुसीको कुरा हो ।
म फेरि पनि भन्छु, यो सरकार जनताको सरकार हो ।
जनताले चुनेको सरकार हो । जनताले जे भन्छन्, जनता जे चाहन्छन्, जनताको हित जे गर्दा हुन्छ, त्यही गर्छ यस सरकारले ।
देशको समृद्धि र विकास यसको अभिष्ट हो ।
राजनीतिक शक्तिहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, पटक पटक जनताका अधिकार दरबारमा बुझाइएका इतिहास आवेश, उत्तेजना र भावनामा बगेर नदो¥याउँ ।
जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले लडेर, बलिदान दिएर ल्याएको लोकतन्त्र पछाडि बसेर प्रोभोक गर्ने तत्वहरुलाई कहिले लाठी लाग्दैन् । ती प्रोभोक गरेर अघि छड्केका हुन्छन् । अनि सर्वसाधरणलाई पार्दिन्छन् । अनि पछि भन्छन्, नोक्सान भयो, क्षति भयो, के ग¥यो सरकारले । फेरि गराउने तिनीहरुनै हुन् । यस्तो कुराबाट हामी अब पनि सजग नहुनु उचित हुँदैन । मेरो आग्रह यो छ ।